Semalt နှင့်အတူ Spam ကိုရပ်တန့်
Website Spam ဆိုတာဘာလဲ
Comment Spam ဆိုတာဘာလဲ
Comment Spam နှင့်ဆက်စပ်သောပြနာများ
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန် Spam ကိုဘယ်လိုရပ်တန့်ရမလဲ
အင်တာနက်သည် spam မြေဖြစ်လာသည်၊ ၎င်းသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများပြားလာမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ယောက်အနေနှင့်၊ သင်သတိပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာ spamming သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အသွားအလာနှင့်ပရိသတ်ကြားခံဆက်သွယ်မှုအချို့ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် spam များကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှတ်ချက်ကဏ္inတွင်အထူးသဖြင့်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သည်ဆက်သွယ်မှုပုံစံ spam များ၊ spam sign up များ၊ လွှဲပြောင်းမှုများ spam များနှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
spam များသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏သရုပ်ခွဲမှု (Google Analytics) အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရုံသာမကသင်၏ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ visitors ည့်သည်များအတွက်အထင်အမြင်သေးစေနိုင်သည်။ spamming ကိုလုံးဝရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတော့မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်သင်၏ site ပေါ်တွင် spamming လုပ်ဆောင်မှုများကိုကန့်သတ်ရန်ရဲရင့်သောခြေလှမ်းကိုသင်လှမ်းနိုင်သည်။ သို့သော် ဦး စွာ၊ သင်သည်သင်၏ site ကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်နေသောဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှင့် spam အမျိုးအစားကိုနားလည်ရန်သင်၏ site ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမည်။
၎င်းသည်သင့်အား spamming လုပ်ဆောင်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုသိရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်သည်ဤအရာသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောကိစ္စတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါက၊ သို့မဟုတ်အရာရာကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဤနေရာတွင်ဆက်သွယ်ပါ Semalt။ တကယ်တော့၊ ငါတို့ဝန်ကိုမင်းတို့လက်ထဲကဖယ်ထုတ်ပြီးသင့် site ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုအစကတည်းကကူညီပေးပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် spam ပြproblemနာကိုအလျင်အမြန်ကိုင်တွယ်ပြီးသင်၏ site သည် spam-free ဖြစ်ရန်လည်းသေချာသည်။
Website Spam ဆိုတာဘာလဲ။
၀ က်ဘ်ဆိုက် spam ဆိုသည်မှာသင်အင်ဂျင်နီယာမပြုခဲ့သောအပြောင်းအလဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကဏ္attachedတွင်ပူးတွဲထည့်သွင်းထားသည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဆက်နွယ်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာတစ္ဆေ sign-ups သို့မဟုတ်တစ္ဆေအဆက်အသွယ်ပုံစံဖြည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပရိုဂရမ်းမင်းကုဒ်နံပါတ်ကွဲခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ပုံစံပင်ဖြစ်ပါစေ spam များကိုအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Spam များကိုများသောအားဖြင့်လူတို့၏အင်ဂျင်နီယာဘုတ်များမှတွေ့ရှိနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်အခြားသူများမှသူတို့၏ဒိုမိန်းသို့လည်ပတ်မှုများ (ကြီးမားသောအသွားအလာ) ကိုတုပရန်ရည်ရွယ်သည်။ Spam များသည်မသင်္ကာစရာ visitors ည့်သည်များကိုသူတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လိမ်လည်လှည့်စားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် spam များသည်သူတို့၏ traffic နှင့် ranking အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဆိုဒ်များတွင်သူတို့လွှင့်တင်သော spam link များမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ spamming လုပ်ဆောင်မှုရဲ့ရလဒ်ကသူတို့ဟာအသွားအလာအရမ်းများတဲ့အတွက်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဒိုမိန်းမှာပြထားတဲ့ကြော်ငြာတွေကနေဝင်ငွေရကြလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤသည်သင်္ကေတဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စပမ်းသမားများအတွက်အကျိုးရှိသော်လည်းသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ site ပေါ်တွင် spamming လုပ်ဆောင်မှုများကိုမှတ်သားပြီး၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသင့်သည်။ မှတ်ချက် spam များသည်အသုံးအများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် spam အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်ဤလမ်းညွှန်တွင်၎င်းကို ပိုမို၍ အလေးထားလိမ့်မည်။
၃။ Comment Spam ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသုံးအများဆုံး spam ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယေဘူယျ bot ကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျ (မ်ား) မှဝက်ဘ်ဆိုက်အပိုင်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။ သင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အခြားမှတ်ချက်များရှိပါက spam မှတ်ချက်များသည်အခြားမှတ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် spambots များကတင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆွေးနွေးနေသောခေါင်းစဉ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိပုံရသောလင့်များပါ ၀ င်လေ့ရှိသည်။ သူတို့က spam မှတ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုပဲစမယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့ကိုမြန်မြန်မကိုင်တွယ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ပုံမှန်မှတ်ချက်များကိုမချမချင်းသူတို့ပုံတူပွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို spam မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြtheနာများမှကာကွယ်ရန်ပြင်ဆင်သင့်သည်။
မှတ်ချက် Spam နှင့်ဆက်စပ်သောပြProbleနာများ
၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်ပုံစံဖြင့် spamming ပြုသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထင်မြင်ချက် spam များဖြင့်အကျိုးဆက်များကိုများသောအားဖြင့်မြင်နိုင်သည်။ ဤတွင်မှတ်ချက် spam ၏အကျိုးဆက်များကိုအချို့။
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကဏ္ section သည် spam သတင်းများနှင့်ပြည့်နှက်သွားပါကစစ်မှန်သောလူသား visitors ည့်သည်များ (စာဖတ်သူများ) ကမှတ်ချက်ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့မြင်နိုင်သမျှ spammy မှတ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့အပြင်စာဖတ်သူများသည်သင်နှင့်သင်၏မှတ်ချက်ကဏ္sectionတွင်သင်နှင့်စကားပြောနိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် spam bot များသည် spam များကိုမှတ်ချက်ပေးနေသည်။
Spam မှတ်ချက်များသည်သင်၏မှတ်ချက်အပိုင်းကိုလုပ်လိမ့်မည်၊ အမှန်မှာ၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်က၊
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာမှမလုပ်ဘဲ spam ထင်မြင်ချက်များကိုချန်ထားခဲ့ပါကသင်သည်သင်၏ visitors ည့်သည်များ၏စက်ပစ္စည်းများကို malware ဖြင့်ကူးစက်ရန် spam များကို“ ဆက်လုပ်ရန်” ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့သည်ပရိသတ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလိမ်လည်လှည့်စားမှုများအတွက်ခိုးယူနိုင်သည်ဟုလည်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
Comment spam သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနှေးကွေးစေပြီး ၄ င်း၏ loading speed ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ၊ မင်းရဲ့တကယ့်ခုန်နှုန်းဟာများလာလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာဂူဂဲလ်သည်သင်၏ဆိုဒ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုတော့ဟုဆိုလိုသည်။
မှတ်ချက် spam များသည်တိကျမှန်ကန်သောဂူဂဲလ် analytics အချက်အလက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အခြေအနေကိုတိတိကျကျမဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ၀ င်ငွေ၏ ဦး ဆောင်မှုနောက်ကျနိုင်သည်။
အထက်ပါသည် spam (အထူးသဖြင့် spam များကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်း) သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုထိခိုက်စေသည့်အကြောင်းရင်းများစွာ၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် spam မှတ်ချက်များမပေါ်လာစေရန်သင်တတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လိုပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ Semalt မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံခြုံစိတ်ချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
၅။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိထင်မြင်ချက်များ spam ကိုဘယ်လိုရပ်ရမလဲ
ထင်မြင်ချက် spam သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိရန်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသင့်သည်။ သင်၏ဆိုက်တွင် spam မှတ်ချက်များကိုတားဆီးရန်နည်းလမ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
spam မှတ်ချက်အများစုတွင် clickbait ခေါင်းစဉ်များနှင့်လူများအား၎င်းတို့ကိုနှိပ်စေလိုသော link များများစွာပါရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လင့်ခ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသာလက်ခံရန်ပြောင်းလဲလျှင်၊ spam များကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။ ဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့တရား ၀ င်ပရိတ်သတ်ကအချိတ်အဆက်တွေထပ်ထည့်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင်ပြေနေတယ်။
အဘယ်ကြောင့်? လူသားများပင်သူတို့၏မှတ်ချက်များအပိုင်းသို့လင့်ခ်များစွာကိုမထည့်သင့်ပါ။ သူတို့ဘလော့ဂ်အတွက်အသွားအလာထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ကိုသုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် spambots သည်သင်၏မှတ်ချက်ကဏ္ to သို့လင့်ခ်များစွာပါသော spam မှတ်ချက်ပေးရန်ကြိုးစားပါကထိုမှတ်ချက်ကိုသင့်တင့်မျှတမှုရှိရန်ပြလိမ့်မည်။
spam မှတ်ချက်အများစုတွင်သော့ချက်စာလုံးများသို့မဟုတ်စာသားများပါ ၀ င်သည်။ သင်သည်၎င်းတို့ကိုမှတ်သားပြီး၎င်းတို့အတွက်လူမည်းစာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးများ (သို့) စကားလုံးများပါသောမှတ်ချက်များသည်သင်၏မှတ်ချက်ကဏ္visibleတွင်မမြင်နိုင်ပါ။ စကားလုံးများ၏ညှို့ခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသောစကားလုံးများကိုသာသင်စာရင်းပြုစုသင့်သည်။ သင်၏အနက်ရောင်စာရင်းသည်သင်၏တရားဝင်ပရိသတ်အတွက်မှတ်ချက်ပေးလိုသောအခါပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများကိုသာမှတ်ချက်ပေးရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်မှတ်ချက် spam များကိုရပ်တန့်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? Spambots သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်။ မရပါ။ သူတို့သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူများမဟုတ်သောကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်သင်၏တက်ကြွသောပရိသတ်ကိုတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာမှတ်ချက်ပေးရန်စိတ်အားထက်သန်သောသူများသို့မဟုတ်သင်၏မကြာခဏဆိုသောဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများသာမှတ်ပုံတင်ရန်အချိန်ယူရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အတွက်ဒီနည်းလမ်းကငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်ဖို့ကျောက်တုံးကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်အားလုံးမှတ်ပုံတင်ရန်အချိန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲမှတ်ချက်မပေးနိုင်သောကြောင့်မှတ်ချက်ပေးရန်နှောင့်နှေးကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မှတ်ချက် spam များကိုရပ်တန့်ရန်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသင့်ပါ။
မှတ်ချက်ဖြန့်ဝေသည့်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မလာမီမှတ်ချက်အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုဝေဖန်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ လူများ (သို့) bot များမှတင်သောမှတ်ချက်များသည်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် spam မှတ်ချက်များကိုအလွယ်တကူသတိပြုမိပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သူတို့မပေါ်ပေါက်မီ၎င်းတို့ကိုဖျက်ပစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်သင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောမှတ်ချက်များအများကြီးရှိလျှင်မှတ်ချက်ဖြည့်ညှင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၌၎င်း၏တိကျခိုင်မာမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားရှိပါကဤနည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးရန်သာရွေးချယ်ပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ visitors ည့်သည်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှာချောမွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊
သင်၏ဆိုက်တွင် Anti-Spam Plug-in တစ်ခုချိတ်ပါ
သင်ကိုယ်တိုင် spam ထင်မြင်ချက်ပြtroubleနာကိုဖြေရှင်းမည့်အစားသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် anti-spam plug-in ကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ plug-in သည် spam မှတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တရားဝင်မှတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် spam မှတ်ချက်များကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ မှတ်ချက်များကိုကောင်းစွာစစ်ထုတ်နိုင်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းရည်ရှိသော Plug-in တစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်၊ spam ထင်မြင်ချက်များကိုနောက်ကွယ်မှမထားဘဲတရားဝင်အချို့ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပဲ။
သင်၏ ဦး စားပေးချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သင့်သည်။ Anti-spam plug-in ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် spam comment ပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကဏ္ focus ကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားသင်၏ site ကိုတိုးတက်စေရန်အခြားအရာများကိုအာရုံစိုက်နိုင်လိမ့်မည်။
Spam သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းယူပြီး ၄ င်းသည်အသုံးမပြုနိုင်သော/spammy ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များချွတ်နိုင်ဘူး။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလည်းထိခိုက်စေသည့်အပြင်၎င်းသည်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ spam များကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဆက်သွယ်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့ Semalt ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ spam ပြtoနာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းရန်။